धिक्कार छ तिमीहरुलाई – Newslines Nepal
धिक्कार छ तिमीहरुलाई
प्रकाशित मिति : २४ चैत्र २०७६, सोमबार ११:३२
क• भिषण (भुषण महर्जन )
जिबनमा सबै कुरा आफ्नो लागी गरिन्छ भन्ने छैन । त्यसमा नि बिशेषत राजनिती सेवा भाव मै गरिन्छ । तर यो युगलाई कुन युगले सम्बोधन गरु – कलियुग ? राजनिती गरे स्वार्थ ,गुलामी र पद लोभका साथ गरिदैछ । ब्यवसाय नि त्यस्तै छ, अझ त्यसमा नि अस्पतालमा त अझ अराजकता छ । लाशलाई समेत भेन्टिलेटरमा राखेर पैसा उठाउने गरेको भेटिन्छ । सेवाको भावना फिटिक्कै देखिदैन ।
त्यस्ताको लाइसेन्स खारेज गर्नु पर्छ । यस्तै जनताको लास माथि राजनिती र भष्टाचार गर्ने तानाबाना बुन्दैछ । जनप्रतीनिधी भएर नियम कानुन र ब्यवहाँरिकतालाई नि हेर्नु पर्छ । होईन नियम र कानुन हेर्छौ भने जननिर्बाचित किन चाहियो ? कर्मचारीले चलाउछन देश ?
यस्तो माहामरीको समयमा तीनै तहको सरकार एवम् कर्मचारीले यो कोरोनाको विपद्को समयमा मानवियता हेर्दैनौ भने जे जे गर्नु छ गर । तिमीहरु जस्तोलाई यमराजले घुस त के माग्छ र ?आफै-आफै रोगी भएर बर्षौ बर्ष छट्पटाएर मर, धिक्कार छ तिमीहरुलाई ।
(यो नितान्त भुषण महर्जनको व्यक्तिगत विचार मात्र हो)